Ma furmi doonaa shirkii maanta loo ballansanaa inuu Muqdisho ka dhaco? | Weheliye Online
Ma furmi doonaa shirkii maanta loo ballansanaa inuu Muqdisho ka dhaco?
Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in shirkii loo ballansanaa in uu maanta Muqdisho ka furmo uusan qorshihiisa waxba iska badalin islamarka uu ku dhici doono waqtigii loogu talagalay.
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimu ayaa BBC u sheegay in qaar ka mid ah wufuudda ka qeyb galaysa shirka ay mar hore Muqdisho soo gaareen.
“Insha allah haddii uu eebe idmo maanta wuu furmayaa shirka 20 May lagu ballamay, maqribadii waxaa yimid madaxwaynaha Galmudug Axmed Qoor Qoor oo Muqdisho lagu soo dhaweeyay,” ayuu yiri Mr Maclimu.
Afhayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale sheegay in maanta galinka hore ay filayaan in Muqdisho ay soo gaaraan madaxda kale ee shirka ka qeybgalaysa
Mr Macallimu ayaa xusay in madaxwaynaha Hirshabeele laga yaabo in imaanshiyihiisa uu dib u dhac ku yimaado oo uu maalin shirka ka soo dib dhaco.
“Maadaama arrimo tacsi iyo waxaasi ay jiraan, waxaa laga yaabaa in uu maalin dib u dhaco madaxwaynaha dowlad goboleedka Hirshabeele laakiin inta kale way imanayaan,”ayuu yiri.
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Maclimu ayaa sidoo kale sheegay in dowladda ay wax walba oo shirka ku saabsan ay diyaarisay islamarkana aysan jirin wax caqabad ah oo hortaagan qabashada shirka .
“Ilaa iyo hadda wax waliba sidii loogu talagalay ayay ku socdaan diyaar garow xoog leh ayaa jiray oo xafiiska rai’sul wasaaruhu horkacayay, waxaa la diyaariyay meeshii ay madaxdu degi lahay, waxaa la diyaariyay wax waliba oo agab ah oo loo baahnaa,” ayuu yir Mr Maclimu.
Mr Maclimu ayaa dhanka kale rejo wanaagsan ka muujiyay shirkan wadatashiga ee arrimaha doorashada oo uu sheegay in uu ku rejo wayn yahay in guulo laga soo hoyiyo.
“Runtii rejo wayn ayaa jirtu markan maadaam xal kale oo u furan Soomaaliya aysan jirin oo aan ka ahayn in ay doorasho aado in madaxduna muujiyaan isu tanaasul oo uu qof waliba masuuliyad muujiyo si dalkan xaaladda kala guurka ah looga gudbo oo dakana nabad iyo barwaaqo uu u gaaro oo doorasho loo galo,” ayuu yir Mr Maclimu.
Dhankale madaxda maamulka Jubaland ayaa xaqiijisay in shirka Muqdisho ay ka qeyb galayaan.
Madaxwayna ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo BBC la hadlaya ayaa sheegay in qorshaha ka qeyb galka shirka ee dhankooda uusan waxba iska badalin.
Sidii horey -ba loogu heshiiyay in 20 bisha la isugu tego qorshaha siduu ahaa jadwalku waa sidiisii, xageyaga wax iska badalay ma laha, waxaana nooga qorshaysan in laga qeyb galo haddii alle idmo, ayuu yiri madaxwayna ku xigeenka Jubaland.
Dhanka Puntland afhayeenka madaxtooyada ayaa xaqiijiyay inay shirka maanta ka furmaya Muqdisho ay qeyb gali doonaan.
Shirarkii horey u dhexmaray madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe ayaa natiija la’aan ku soo dhamaaday.
Shirkan ayaa waxaa uu shirarkii ka horeeyay ee arrimaha doorashada uu kaga duwan yahay in rai’sul wasaaraha dowladda Fedaraalka Maxamed Xuseen Rooble uu qabanqaabadiisa leeyahay islamarkana loo xil saaray in uu qaato masuuliyadda arrimaha doorashada iyo amniga.
Previous articleSidee ku timid lacagta Fatahaadda. Yaa saxiixay. Yaa xayiray lacagta iyo sababta loo xayiray?
Next articleDEG DEG:Wararkii ugu dambeyay shirka Muqdisho,Go’aanka Farmaajo & RW Rooble&DENI oo balanta ka baxay